Soo dejisan Angry Birds 8.0.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Angry Birds
Shimbiraha careysan – kulan Arcade caan ah, kaas oo dhaliyay goolkii ugu weyn waa isku day ee Shimbiraha inuu ku soo laabto ukunta xaday by doofaarka. Kulanka waxa uu isticmaalaa siddada suunka ah oo macneheedu yahay oo ciyaaryahanka u bilawday Shimbiraha in doofaarka, kuwaas oo ku yaala dhismayaasha kala duwan. In Shimbiraha careysan doofaarka ku yaalaan dhismayaasha la blocks ka mid ah maaddooyinka kala duwan waxaa lagu halligay hit toos ah iyo Schalke ee blocks kale. Ciyaarta ayaa waxaa ku jira heerar kala duwan, taas oo waxaa lagu tiriyaa sida dhameystiray ka dib markii tirtiridda oo dhan oo doofaarradii on garoonka lagu ciyaarayo. Sidoo kale in Shimbiraha careysan ayaa waxaa jira beedka dahabka ah oo ciyaaryahanka ka furmay heerka gunnada.
Tiro badan oo heerar
Saamaynta dhawaaqa Funny
Soo dejisan Angry Birds
Faallo ku saabsan Angry Birds
Angry Birds Xirfadaha la xiriira
Codsiga waxaa la tiro badan oo ka mid ah talooyinka iyo dib u eegista Rakaabkii qorshaynta safarka adduunka oo dhan ah. Software wuxuu bixiyaa macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan nooca gaadiidka u caga safarka iyo fasaxa.